Tsvaga Zvinzvimbo Zvemamiriro Chikamu Chinowirirana 2013 | Martech Zone
DK New Media achangosaina kusaina na Zvitsva zvekutsvaga uye isu tave kusimudzira suite yavo semubatanidzwa pano Martech Zone. Chikonzero chakakosha ndechekuti ivo ndevamwe vevashoma SEO zvishandiso izvo zviri kutarisa zvakanyanya kutarisisa pahukama hwehukama uye chinzvimbo seimwe yechinyakare SEO zvinhu.
Ndeapi mapeji ewebhu akanyatsoiswa zvakanaka neGoogle akafanana uye chii chinoasiyanisa kubva pamapeji epasi epasi? Tsvaga yekutsvaga yakaongorora mazana matatu emazana ema URL anoonekwa munzvimbo dzepamusoro dzekutsvaga kwekuvapo uye kukura kwezvimwe zvinhu. Mhedzisiro yacho inoratidzwa maererano nemabatirwo anoita izvi zvivakwa (zvinhu) zvinowirirana neGoogle chinhanho (uchishandisa Spearman's chinhanho chekubatana chakaringana).
Chirevo ichi chakazara uye hachimiriri zvisirizvo data (chinokonzera nekuenderana) semakambani mazhinji ekutsvaga enjini yekutsvaga uye nyanzvi dzinoita. Chinhu chakakosha kutora kwatiri kukanganisa kweyakajairika nzira dzekutsvaga dzakasanganiswa nekugovana munharaunda…. wow!
GM: Uri Kuita Ongororo Zvakashata
Jul 12, 2013 pa 5: 10 AM
Yakanaka infographic. Zviratidzo zvemagariro uye Google Authorships zvakare zvakakosha kuita zvinhu pakuwana chinzvimbo chakanaka muSERP.